ओहो बजार एउटा अनलाइन गन्तव्य - प्रविधि - साप्ताहिक
तपाईंसँग हातमा स्मार्टफोन छ, तर पनि अर्को स्मार्टफोनको खोजीमा हुनुहुन्छ ? कि गाडी वा मोटरसाइकल किन्ने विचारमा हुनुहुन्छ ? तपाईंसँग कति बजेट छ ? बजारमा पाइनेभन्दा सस्तो पनि चाहिएको छ कि ? यति मात्र होइन, तपाईंलाई आफूसँग भएका पुरानो सामान पनि बेच्नुपरेको छ ? मूल्य कति राख्नुपर्ला ?
हो, अब स्मार्टफोनमै आफूलाई आवश्यक विभिन्न सामग्रीका बारेमा जानकारी पाइने भएको छ । यस क्रममा आफूसँग भएको सामान बिक्रीका लागि उपलब्ध गराएर फेरि अर्को उपयुक्त मूल्यको सामान पनि खोज्न सकिन्छ ।
वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट यस्ता सामान खोजी गर्ने चलन नेपालमा केही समयअघिदेखि नै प्रचलित थियो, तर अब स्मार्टफोनमा उपलब्ध एप्सबाटै यी सबै कार्य सम्भव भएको छ ।
यसका लागि ओहो बजारको एप्स प्रयोग गर्न सकिन्छ । ओहो बजारले नेपाली उपभोक्तालाई लक्षित गरी ल्याएको यो एप्सले छोटो समयमै निकै चर्चा पाएको छ । ओहो बजारको एप्स गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी फेसबुकको माध्यमबाट पनि यसमा लगइन गर्न सकिन्छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो सामान बिक्रीका लागि राखिसकेपछि यसमा वाचलिस्ट, कमेन्ट, रिप्लाई आदि पनि उपलब्ध हुन्छ । यसैमा विभिन्न व्यक्तिको प्रतिक्रियाको नोटिफिकेसन पनि आइरहन्छ । यसका कारण अन्य ग्राहकको प्रतिक्रिया र यसका बारेमा थप जानकारीसमेत प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक यसमा बिक्रीका लागि राखिने अन्तिम मिति, त्यसका भ्युअरको संख्या, लाइक, रेटिङ आदि सबै जानकारी लिन सकिन्छ ।
यसको भुक्तानी पनि सजिलो छ । ग्राहकले आफ्नो सहजताअनुसार नगद वा ई–सेवामार्फत भुक्तानी गर्न सक्छन् । सामान पनि आफूले भनेको स्थानमै आइपुग्छ । बजार मूल्यभन्दा १५ प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि सस्तोमा सामान उपलब्ध हुन्छ ।
सिरान टेक्नोलोजीले निर्माण गरेको यो एप्स हालसम्म ५० हजारभन्दा बढी डाउनलोड भैसकेको छ । यसका प्रयोगकर्ताको संख्या डेढ लाखभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ । यसलाई नेपालकै पहिलो क्लासिफाइड मार्केट प्लेसका रूपमा विकास गरिएको सिरान टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सजत श्रेष्ठ बताउँछन् । ओहो बजारले नि:शुल्क रूपमा जसले पनि आफ्नो सामान बिक्रीका लागि राख्ने वा आफ्ना लागि उपयुक्त सामान खोज्ने थलोका रूपमा लोकप्रियता कमाएको छ । यसमा स्मार्टफोन, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीदेखि लिएर अटोमोबाइल तथा अन्य विविध सामग्री बिक्रीका लागि राख्न वा उपयुक्त सामान खोज्न सकिन्छ ।
अब सुरक्षित बाइक चढ्न पाइने
अहिले युरोपेली मुलुकहरूमा स्वास्थ्य एवं वातावरणमैत्री बाइक चढ्ने लहर नै चलेको छ । यसै सिलसिलामा लन्डनस्थित एक डिजाइनरले संसारकै सर्वाधिक सुरक्षित तथा भरपर्दो बाइकको विकास गरेको दाबी गरेका छन् । उक्त सुरक्षित बाइकको नाम हो– बाबेल बाइक र यसका विकासकर्ता हुन्– क्रिसपिन सिन्कलेयर ।
उक्त बाबेल बाइकलाई खुट्टाले चलाउन सकिने भए पनि विद्युतीय मोटर जडान गरिएकाले आवश्यकता अनुसार दुवै सुविधाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाइकमा पछाडि बस्ने सिटलाई सुरक्षित पिंजडा जस्तो बनाइएको छ भने चालकका लागि कारको जस्तो सिटबेल्ट बाँध्ने सुविधाका साथै खुट्टा सुरक्षित गर्ने उपकरण पनि जडान गरिएको छ । उक्त बाइकमा अगाडि–पछाडि संकेत बत्ती, पछाडिको वस्तुस्थित हेर्ने लुकिङ ग्लास तथा हर्नको सुविधासमेत छ । सबै सुविधा भएकाले यो बाइकको मूल्य पनि महँगो नै छ अर्थात ५ हजार १ सय ७० डलर । यो बाइक सन् २०१६ सम्ममा बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ ।
यो बाइकको अगाडिको चक्का पछाडिको चक्काको दाँजोमा केही सानो छ । यो बाइकलाई ब्याट्री चार्ज गरेर चलाउने हो भने युरोपमा प्रतिघण्टा २० माइल र अमेरिकामा प्रतिघण्टा १५ माइलको गतिमा गुडाउन सकिन्छ । २ सय ५० वाटको विद्युतीय मोटर जडान गरिएको यो बाइकबाट एक पटकको ब्याट्री चार्जमा न्यूनतम ८० देखि १ सय ३० किलोमिटरसम्म चलाउन सकिन्छ ।
मोबाइल अनलक गर्ने नयाँ विधि
य.दि तपाईंसँग एन्ड्रोइड ललिपप स्मार्टफोन छ भने अब त्यो ‘ओके गुगल’ भन्नेबित्तिकै ‘अनलक’ हुन्छ । गुगलले आफ्नो ट्रस्टेड भ्वाइस स्मार्ट लक फिचर ललिपप ओ एस ग्याजेट्सका लागि जारी गरेको हो । गुगलको स्मार्ट लकको प्रयोगपछि प्याटर्न वा पासवर्ड लक आवश्यक हुनेछैन ।
एन्ड्रोइड ललिपप ओ एस ग्याजेट्समा गुगलको ट्रस्टेड भ्वाइस लक फोनको सेटिङमा यो सुविधा उपलब्ध छ । यहाँबाट यसलाई अन गरिसकेपछि यो फिचरले काम गर्न थाल्छ । यो लक लगाउन प्रयोगकर्ताले आफ्नो स्वरले ‘ओके गुगल’ भनेर बोलाउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई चिनेर मोबाइलले सुरक्षित गर्छ । त्यसपछि मोबाइल अनलक गर्दा ‘ओके गुगल’ भन्नुपर्ने हुन्छ ।
गुगलको यो लक फिचर आकर्षक र सुविधाजनक पनि छ, तर यसका केही कमजोरी पनि छन् जसलाई गुगल आफैंले पनि स्वीकार गरेको छ । यो फिचरले प्रयोगकर्ताको आवाज चिनेर काम गर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के हो भने प्रयोगकर्ताको आवाजको नक्कल गर्नसक्ने कुनै अर्को व्यक्तिले पनि मोबाइल अनलक गर्न सक्छ । त्यसबाहेक कुनै व्यक्तिले प्रयोगकर्ताको स्वर रेकर्ड गरेर मोबाइललाई सुनाउँदा पनि फोन अनलक हुन सक्छ ।
नेपाली भाषामा युट्युब
भिडियो स्ट्रिमिङ साइटका रूपमा परिचित युट्युब अब नेपाली भाषामा पनि उपलब्ध हुन थालेको छ । यद्यपि यसमा भएका भिडियोहरू भने आफ्नै भाषामा हुनेछन् । अब युट्युब नेपालीसहित ७५ भन्दा बढी भाषामा उपलब्ध छ । युट्युबमा संसारभरबाट प्रतिमिनेट ३ सय घण्टा बराबरको भिडियो अपलोड गरिन्छ । यसभन्दा अघि सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि गुगल ट्रान्सलेट तथा सन् २०१४ को जुलाईदेखि जिमेल नेपाली भाषामा उपलब्ध हुन थालेका थिए ।
खुलेआम कालो बजार
चाडबाड लक्षित बाइक बजार
सुनसान सस्तो बजार
नास्टमा नयाँ प्रविधि भवन फाल्गुन १४, २०७६
इनोभेटिभ जेनेरेसन फाल्गुन १३, २०७६
विश्वका टप आईटी कम्पनीका सीईओहरू माघ १३, २०७६